Koob Tartan Kubada Cagta ah oo la magac baxay Taageer Sportiga oo ka dhacay Hargeysa | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Koob Tartan Kubada Cagta ah oo la magac baxay Taageer Sportiga oo ka dhacay Hargeysa
Published on January 18, 2015 by sdwo · No Comments
Waxaa Daraad galabtii lagu qabtay garoonka Dheereeye Football Academy tartan lnoociisa aan hore loogu arag lana magac baxay TAAGEER SPORTIGA.
Waxaa soo qabanqaabiyay haldoorka cayaaraha Somaliland Hassan Waraabacadde tartankan oo socday maalin keliya.
Tartankii daraad galabtii ee la magac baxay Taageer Sportiga ee loo qabtay 8 kooxood ee Acadamiga Dheereeye oo Ahaa da yarta 12jirka ah.
Waxaa furitaanka goobjoog ka ahaa Xildhibaan Xassan Cawaale Caaynaan oo ah Gudoomiyaha Arimaha Bulshada ee Golaha wakiilada Somaliland, waxaa uu sheegay in uu aad ugu farxay dhalinta soo kareeysa iyo xiisaha aay u hayaan cayaaraha, waxaanu uu aad u amaanay kaalinta Mr waraabacadde uu kaga jiro horumarinta isagoo dayarta kula dardaarmay cayaar wanaag.
Ugu dambeeyntii waxa si habsamiya u soo gabababoobay tartankii waxaana qaaday kooxda yaryar ee Xero Aawr ee uu hogaaminaayay Macalin Birlo waxaayna rigorayaal kaga badiyeen kooxda Dhalinta xarunta agoomaha.